Imimoya Engcwele - I-Yatesville Lake Luxury Cabin Rental - I-Airbnb
Imimoya Engcwele - I-Yatesville Lake Luxury Cabin Rental
Louisa, Kentucky, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Aaron
U-Aaron Ungumbungazi ovelele
Uyemukelwa ku-Sacred Winds, indawo ecezile futhi ewubukhazikhazi eqashwa ngabanikazi e-Yatesville Lake State Park e-Eastern Kentucky.
Itholakala egqumeni elicezile le khabhini ilungele ukudoba kwakho, igalofu, umndeni noma nje ukubaleka kwezothando.
Uyemukelwa ku-Sacred Winds, indawo ecezile futhi ewubukhazikhazi eqashwa ngabanikazi e-Yatesville Lake State Park e-Eastern Kentucky. Umuzwa wekhabethe elivulekile ukumema ukuthi uhlale futhi ukhululeke kukho konke.
Indawo Eqashwayo Yekhabhine engu-#1 e-Eastern Kentucky. Indlu yethu yomuntu siqu yeholide iyindlu yokuqasha eyi-premium elala izivakashi ezingafika kweziyi-10 futhi ihlanganisa yonke ifenisha ephezulu, izinto zikagesi nezinto zikagesi. Ihlezi eceleni kwesiqongo sentaba esihle ngaphakathi kwe-Yatesville Lake State Park e-Louisa, e-KY, le loji yeholide engamamitha-skwele angu-2,000 ilungele ukudoba, igalofu, umndeni noma nje iholidi lokubalekela ezothando.
Kulo nyaka eduze kwekhaya leholide kuyindawo edumile yokuhlala nokudlala e-Eagle Ridge Golf Course edumile e-Yatesville Lake State Park e-Eastern Kentucky. I-Sacred Winds cabin nayo iyintandokazi yama-Romantic Getaways, amaholide omndeni noma indawo encane yokuhoxa.
Izinsiza ze-Sacred Winds Cabin zifaka:
Ngaphakathi - Indawo yomlilo kagesi yetshe edonsa umoya, amagumbi okulala angu-2 kanye nebhavu elingu-1, u-Amish wenza iCedar Log Queen & Full Bunk Beds enomatilasi be-Tempur-Pedic, ingxenye yesikhumba ye-Flexsteel kanye nesihlalo esiphezulu kanye ne-ottoman, u-Amish wenza itafula lokudlela lomsedari nezihlalo ezingu-8, izindawo zokubala zekhishi ezimnyama zegwadle kanye nebha elinezibha zelogi ezingu-4 zama-Amish, izinto zensimbi ezingenasici, iwasha eliphezulu nesomisi, 60 inch Smart TV ene-Roku, i-Netflix ne-YouTube Live TV, umbhede welogi ongusayizi wenkosi we-Master Suite onevulandi, 50 inch HD TV ne-Netflix kanye ne-YouTube Live TV, indawo ephezulu ene-log daybed ne-trundle, i-Mame Arcade System enemidlalo yakudala ye-arcade ne-Nintendo, igumbi lokugezela elilodwa elikhulu eligcwele kanye nebhavu elinguhhafu ekamelweni eliphambili, futhi siyakwazi ukufinyelela ku-inthanethi ye-fiber esheshayo enomzila ongenantambo. ...... futhi yilokhu okungaphakathi kuphela.
Ngaphandle: Umpheme omkhulu ozungezayo onezihlalo ezinyakazayo, igceke elingemuva elinezihlalo kanye nomgodi womlilo wezinkuni, indawo yokushisa efana nepaki, ngaphezu kwamahektha angu-3 egumbi lokuzulazula kanye nokuzidela kwenkathi yokuphila ne-Yatesville Lake State Park.
Le khabhini yakhelwe endaweni enamahlathi egqumeni elicezile kakhulu. Le ndlu kanokusho izofana nenhle kunazo zonke enikezwa yi-Smoky Mountains noma i-Hocking Hills futhi izwakala e-Eastern Kentucky.
* Amanani asekelwe ezivakashini ezingu-2-4. Ukuze sigcine izindleko ziphansi asikhokhisi inani elikhulu lezihambeli ezingu-4 kuphela. U-$15 ngesihambeli ngasinye esingeziwe ungaphansi ngo-40% kunesilinganiso sokuqashwa kwekhabhinethi. Ikhabhinethi yethu iqhathaniswa nendlwana yokulala engu-$325 ebusuku e-Smoky Mountains.
Ukudla kwakho siqu, ama-shampoos kanye nensipho. Ukudla.
I-Walmart iqhele ngamakhilomitha angu-5 e-Louisa nje u-Route 23.
Ihora eli-1 kuphela ukusuka eCarter Caves.
Letha izinkuni zomgodi womlilo ongaphandle.
Abangabhemi, okungcono azikho izilwane ezifuywayo.
Igalofu - Inkundla Yegalofu Eyaziwa Kuzwelonke I-Eagle Ridge.
Ukuhamba ngezintaba - I-Yatesville Lake State Park iyikhaya leMary Ingels Trail 3.5 Miles edume kabi.
I-ATV Riding - I-Eastern Kentucky idume ngokugibela i-ATV yezwe elingemuva okuhlanganisa nemizila edumile yaseHatfield & McCoy. Le khabhinethi icishe ibe yihora ukusuka ku-Trail Head of Hatfield & McCoy.
Ukudoba - Okunye okuhamba phambili kokudoba ama-bass ezweni kutholakala kumayela elingu-1 ukusuka kule khabhini. Fish 26 miles of Yatesville Lake, letha isikebhe sakho.
Ukugibela amahhashi e-Yatesville Lake State Park.
Sibheke ngabomvu ukwabelana ngendawo yethu siqu yokubalekela nawe nabangani bakho nomndeni wakho.
Imibhede emikhulu engu-2, imibhede eyidabuli engu- 2
Ukuthuthukiswa kwe-Ced Gap kutholakala nje ikhilomitha elilodwa ukusuka ekungeneni kweYatesville Lake State Park. Bakhona omakhelwane, nokho-ke iningi labo lisebenzisa amakhabethe njengendawo yokuhoxa ngezimpelasonto. Le khabhini yakhelwe egqumeni futhi iyimfihlo.
Ukuhlala kwakho kuzoba yimfihlo ngokuphelele. Sinesistimu yezokuvikela futhi sizohlola okurekhodiwe kuphela uma kukhona okonakele noma sikholelwa ukuthi bekunezivakashi eziningi endaweni kunezo eziqashiwe ezingakwazanga.